သုတေသီများအသစ်သောသိုးနွားရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဖြန့်ကနေတားဆီး - တရုတ်ချုံကင်း Fangtong
ပုံပျက်နေသောနွားသငယ်၏မျိုးဗီဇလေ့လာမှုများအပြီးတွင်သုတေသန Holstein တိရစ္ဆာန်များအကြားတွေ့ရှိရမယ့်ယခင်ကမသိသောရောဂါဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ mutation နှင့်အရှင်ပုံပျက်သောအစပြုရာမှအဆိုပါမွေးမြူရေးနွားကိုယခုထပ်မံပြန့်ပွားခြင်းမှရောဂါကာကွယ်တားဆီးဖို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တဦးတည်းမွေးမြူရေးနွားသုတ်ရည်မွေးမြူဒိန်းမတ်တိရစ္ဆာန်များအတွင်းနွားတွေအများကြီး inseminate အသုံးပြုသည်။ ကြောင့်နွားသငယ်၏တဦးတည်းသောနွားထီးတကောင်နိုင်အရှင်ဖခင်ထောင်ပေါင်းများစွာအများအပြားသုက်ရန်။ ဒါကြောင့်မွေးမြူနွားမျိုးရိုးလိုက်ရောဂါများသယ်ဆောင်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်အရေးပါလှသည်။
ဤသည်ကိုပင်ဟေဂင်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများရုံပွုပါပွီအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ သိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ Holstein နွားသငယ်အကြားလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ BMC မျိုးရိုးဗီဇ သူတို့မျက်နှာ dysplasia Syndrome ခေါ်ခြင်းရွေးကောက်တော်မူပြီမျက်နှာပုံပျက်သော - သူတို့တိရိစ္ဆာန်များအကြားတစ်ဦးယခုတိုင်အောင် undescribed ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသုတေသီများနွားသငယ်တို့တွင်ရောဂါ၏အကြောင်းရင်းကိုသောမျိုးဗီဇ mutation ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်တဦးတည်းသီးခြားမွေးမြူရေးနွားထီးတကောင်မှပြန်ခြေရာခံပါပြီ။ နွားယခုအသစ်မွေးဖွားသောနွားတို့တွင်ရောဂါထပ်မံဖြစ်ပွားမှုမှကာကွယ်ရန်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
'' ကျနော်တို့တဦးတည်းမွေးမြူရေးနွားကိုနွားသငယ်တို့တွင်ပုံပျက်သောမှဦးဆောင်သောသုတ်ရည်ထုတ်လုပ်သောတစ်ရှူး၏ဆဲလ်တစ် mutation တီထွင်ခဲ့ကွောငျးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နွားအများကြီးကဲ့သို့မြည်မက၎င်း၏အမျိုးအနွယ်၏ 0.5 ရာခိုင်နှုန်းပေါ်တွင် mutation လွန်။ သို့သော်ဤနွားကိုပြီးသား 2,000 ကျော်နွားသငယ်ဖခင်ခဲ့ကြောင်းနှင့်အလားအလာဖခင်မှ ပို. ပင်လာကြပြီနိုင်ဘူး။ လူအားလုံးတို့သည်ပုံပျက်နေသောနွားသငယ်သေဆုံးဒါမှမဟုတ်သူတို့ခံစားခဲ့ကြသောကြောင့်, ဖကျြဆီးခံရခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့် '' အကြောင်းရင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အရေးကြီးသောခဲ့ကုသရေးလက်တွေ့သိပ္ပံဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပါမောက္ခဂျော်ဂန် Agerholm ကပြောပါတယ်။
မျက်နှာပုံပျက်သောအတူနွားသငယ်၏တိရိစ္ဆာန်ဆရာထံမှသတင်းအချက်အလက်များလက်ခံရရှိပြီးမှဂျော်ဂန် Agerholm Facebook ပေါ်မှာအပါအဝင်, နွားတိရိစ္ဆာန်ဆရာသူ့ရဲ့ network ကပိုမိုဖြစ်ပွားမှုရှာနေသွားလေ၏။ ထို့နောက်သူသည်စာမေးပွဲပိုနွားသငယ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါပုံပျက်နေသောနွားသငယ်၏ DNA မှမျိုးဗီဇလေ့လာမှုများအကြောင်းမဲ့နှင့်ဒီမှာသုတေသီများပုံမှန် Holstein DNA တွင်မတွေ့ရှိတဲ့ mutation ပါရှိသောသောမျိုးရိုးဗီဇ၏ခြုံငုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်တို့ကြောင့်ပုံမှန် Holstein DNA ကို၏စေ့စေ့စပ်စပ်ယခင်မြေပုံချထားပုံများဖြစ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသုတေသီများထို့နောက်အလားတူမျက်နှာပုံပျက်သောလူတို့တွင်တွေ့ရှိရနေကြပြီး, ဤမျိုးရိုးဗီဇ၏တူညီသောအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြတယ်, အသစ်မွေးဖွားကလေးငယ်တို့တွင်အပိုပြီးအထူး FGFR2 ဗီဇသိခဲ့ရတယ်။ ဤသည်မှာမျိုးရိုးဗီဇနွားသငယ် '' မျိုးနွယ်၏မျိုးရိုးဗီဇအတွက် sequenced နှင့်သုတေသီဖြစ်လျှင်ဤမျိုးရိုးဗီဇအတွက် mutation နွားသငယ်တို့တွင်ရောဂါဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သောကြောင့်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခဲ့သည်။ လူ့ရောဂါအရှင်ဗီဇ mutation ဖော်ထုတ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သုတေသီများကူညီပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါသုတေသီများလည်းနွားသငယ် '' မိဘများနှင့်မောင်နှမထံမှ DNA ကိုဆန်းစစ်နှင့် mutation လည်းဤနေရာတွင်ကြီးစိုးကြောင်းသိရှိခဲ့၏။ ဒါက mutation မိခင်သို့မဟုတ်ဖခင်ဖြစ်စေခြင်းမှမဟုတျဘဲမိခင်နှင့်များစွာသောမျိုးရိုးလိုက်ရောဂါများနှင့်အတူအမှုဖြစ်သောဖခင်နှစ်ဦးစလုံးထံမှအပေါ်လွန်သောအခါနွားသငယ်သည့်ပုံပျက်သောဖွံ့ဖြိုးပြီးဆိုလိုသည်။
အခြို့သောမျိုးရိုးလိုက်ရောဂါများအလွန်နာကျင်နှင့်မှားနေသောဖြစ်သကဲ့သို့ '' ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က, ဖျားနာခြင်းနှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်နွားသငယ်၏နံပါတ်ကိုလျှော့ချဖို့အစဉ်အမြဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်မျက်စိကျနွားသငယ်၏ဦးခေါင်းကနေချိတ်ဆွဲလျက်, မျက်နှာပုံပျက်သောသူတို့ကိုပြင်းထန်အသက်ရှူပြဿနာများရှိသည်စေ၏။ ဒါဟာစေသောနာကျင်မှုစိတ်ကူးရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ ဤကဲ့သို့သောသုတေသနရလဒ်များကထိုကဲ့သို့သောရောဂါများပြန့်ပွားကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်အသက်သာချောင်ချိရေးအရှိန်မြင့်မည်ဖြစ်သည်။ နှင့်သင်တန်းကလည်း '' ဆုံးရှုံးမှု minimize နိုင်နေသောတိရစ္ဆာန်များပိုင်ရှင်များ၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်သည်လည်းကုသရေးမျိုးပွားခြင်းနှင့်သားဖွားများအတွက်ပုဒ်မဌာနမှူးသူသည်ဂျော်ဂန် Agerholm, ရှင်းပြသည်။
* CAPTCHA: အဆိုပါ select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. House